रविन्द्र, रवि र रेशम « LiveMandu
२१ पुष २०७५, शनिबार २१:२३
यस हप्ता नेपाली मिडिया, जनमानस अनि सामाजिक सञ्जालमा ब्याप्त थियो । यि ३ वटा र मा धेरै मुद्धाहरु अनि आवाजहरु केन्द्रित भएका छन्, यस हप्ता । बहुत अद्भुत संगम देखियो हवाईजहाज, बिवाह र छोडपत्र अनि शपथको कुराले । गणतान्त्रिक नेपालले संसदमा पहिलोपल्ट कारागारवाट कैदिलाई ल्याएर शपथ खुवाएको छ, जे होस् यस हप्ता नेपाली कैदिहरुले विश्वलाई नै एउटा उत्प्रेरणा र उदहारण दिएका छन् ।
फेरि शुक्रवार एक हुल कार्यकर्ताहरु गएर एउटा अमुक पार्टीको उपस्थिती जनाउन हुनसक्छ हवाईजहाज कम्पनीका निर्देशकलाई कालोमोसो पनि दलेर आएछन्, शनिवार कालोमोसोको प्रभावले सामाजिक सञ्जाल कालोमोसो मय भएको छ । मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले गाई दुहेर चुनाव ताका कृषी र समृद्धिलाई जोडेका हुन् । पछि हवाईजहाज प्रकरणमा आफ्नो नाम मुछिएमा राजनितीबाटै सन्यास लिने कुरा पनि भएको हो, अब हेरौं के के हुन्छ यस देशमा । के खासमा यि मन्त्री दोषी नै हुन त ? ७५ प्रतिशत बढि रकम भुक्तानी अर्कै सरकारको पालामा भएको र अन्तको किस्ता आँखा चिम्लेर दिने यि मन्त्रीले जुठो हाले या हालेनन ? कि फोकटिया काण्डमा फसे भन्ने कुरा जान्न अर्को हप्ताहरु पर्खन जरुरी छ ।
उता रवि लामीछाने हरेक हप्ता नेपालमा दोहोरिरहने नाम हो । बिभिन्न काण्ड अनि पर्दाफाशमा आइरहने यि पत्रकार यसपाला बिवाहको मुद्धामा निकै चर्चामा रहे । बालबिवाह गरेको जस्तो कुराहरु निकालेर स्पष्ट पार्न खोजेका यि पत्रकारका परिवारको निकै कुराहरु यस हप्ता सार्वजनिक भए । रविको बिरोध भन्दा पनि समर्थनका आवाजहरु यस हप्ता धेरै देखिए अनि भित्ताहरुमा पोष्ट्याइए ।
हप्ता बडो रोमाञ्चक थियो । रवि अलिक स्पष्टिकरणमा केन्द्रित भए अनि रेशम कारागारबाट दम्भका साथ संसद पुगेर फर्किए । यता रविन्द्र नेपाली काँग्रेसको करतुतका वलिको बोका भएका हुन् या अरबौंको मोहमा चिप्लेका हुन् पनि जान्न बाँकी छ ।
रविन्द्रको कुराकानी छिनोफानो होस् अनि रविले पनि आरोपवाट न्याय पाउन् । रेशमलाई भएको राजनैतिक छत्रछायाँको यात्रा कारागारवाट संसदसम्म कहिलेसम्म हुने हो हेरौं ।
यस हप्ता ३ वटा धेरै चर्चामा रहे । अब अर्को हप्ताको चर्चाको बिषयमा के रहनेछ ? हामी हेर्दैगरौं न हुन्न ?